DONEAX Smart Pulsed Ultraviolet Disinfection Robot, oo ah hub cusub oo loogu talagalay ka hortagga iyo xakameynta dareenka isbitaalka!
Maaddaama cudurka faafa ee cusubi uu si tartiib tartiib ah u galayo kahortagga iyo xakamaynta caadiga ah, oof-wareenka cusub ee loo yaqaan 'pneumonia', oo u adeegsada dhibco iyo la-xiriiridda marinka gudbinta ee ugu weyn, istiraatiijiyadda ugu muhiimsan ee lagu xannibayo marinkeeda gudbinta waxaa ka mid ah xirashada waji-xidhka, hawo-qaadashada, iyo nadaafadda gacanta, sida si fiican ...
Jeermiska jeermiska jeermiska lagu dilo ee loo yaqaan 'DONEAX technology' iyo jeermiska jeermiska looga dilo ayaa loo isticmaalaa in lagu dilo jeermiga iyo dila fayrasyada, bakteeriyada iyo bakteeriyada si loo hagaajiyo nadaafadda deegaanka.
Bukaanada halkaan ku qaata daweynta badanaa waxay la xanuunsadaan difaac hooseeya daaweyn darteed waxayna u nugul yihiin cudurada faafa. Microbes-ka keena infekshinka ayaa noqda kuwo caqli badan oo antibiyootigana adkaysi u leh, waana sababta aan ugu baahanahay hub cusub sida tiknoolajiyada DONEAX doneax's pulsein s ...
The coronavirus-ka cusub, isku-darka alaabta ee DONEAX, ayaa iska caabin kara awoodda 2019-nCoV.
The coronavirus-ka cusub, isku-darka alaabta ee DONEAX, ayaa iska caabin kara awoodda 2019-nCoV. Qorshaha cusub ee baaritaanka oof wareenka iyo daaweynta ayaa la bilaabay Febraayo 3-deedii galabtii (Guddiga Caafimaadka Difaaca Qaranka) (nooca shanaad tijaabada). Wax soo saarka nidaamka ee Shenzhen DONEAX technolog ...
Daraasad ku saabsan arjiga | robotka jeermiska lagu dilo jeermiska 'ultraviolet disinfection robot' ee qeybta karantiimada ee isbitaalka
Cudurka Sambabka ee Novel coronavirus wuxuu dadka u keenay faham dhab ah oo ku saabsan dhibaatada weyn ee cudurrada faafa u leeyihiin bulshada aadanaha tan iyo bishii Diseember ee sanadkii hore. Furaha kahortaga infekshinka iyo qorshaynta xakamaynta waa in sifiican looga hortago faafida iyo xakamaynta lana daahiriyo samirka ...
Teknolojiyad casri ah - taageerida dareenka isbitaalka - alaabooyinka taxanaha tiknoolajiyadda 'DONEAX' waxay sameeyeen guulo waaweyn
Tikniyoolajiyadda hal-abuurnimadu waxay ka caawisaa dareenka isbitaalka Marka la gaaro Diseembar 20, 2019, "kulanka sanadlaha ah ee tacliinta iyo kulanka shanaad ee doorashada ee isbitaalka cudurka Gudiga Xirfadleyda ee Ururka Caafimaadka ee Shenzhen" oo ay si wadajir ah u qabteen Shenzhen Medical Association iyo Shenzhen University Ge ...
Isbitaalka Huashan ee ku yaal magaalada Shanghai ayaa soo bandhigay DONEAX heerkulka sare ee sterilizer-ka si loo ilaaliyo shaqaalaha caafimaadka
Tan iyo markii uu dillaacay cudurka sambabka ee loo yaqaan 'coronavirus pneumonia', ogaanshaha asiidhka nukliyeerka wuxuu noqdey hab muhiim u ah baaritaanka kiisaska. Maalmahan, ogaanshaha asiidhka nukliyeerka wuxuu noqday hanaan lagama maarmaan u ah baaritaanka qoto dheer iyo daaweynta isbitaalka. Qaab dhismeedka shaqaalaha aaggaani waa mid adag ...
Tikniyoolajiyadda 'DONEAX' oo lagu garaacayo robotka disha jeermiska UV waxaa la wareegey Xafiiska Shenzhen ee kormeerka Caafimaadka
Cudurka Coronavirus wuxuu ku faafayay waqti aad u dheer, ka hortagga iyo xakamaynta sayniska ayaa noqotay mudnaanta mudnaanta. Bishii Janaayo 31, 2020, Shenzhen Xafiiska Kormeerka Caafimaadka Degmada ayaa si deg deg ah u wareejisay mashiinka jeermiska jirka lagu dilo ee loo yaqaan 'ultraviolet disinfection' oo ay soo saartay shirkadda Shenzhen DON ...
Waxyaabaha taxanaha jeermiska dila ee 'DONEAX' waxay galayaan qaybta daawada ultrasoundka ee kuliyada sideedaad ee CUHK si ay uga caawiso isbitaalka dareenka xakamaynta!
Cudurka cusub ee cusub ee loo yaqaan 'corovavirus' wuxuu mar labaad galiyay xakameynta infekshanka isbitaalka meel muhiim u ah horumarka. Sida qalabka baaritaanka guud ee hay'adaha caafimaadka, baaritaanka caafimaadka ee ultrasonic wuxuu badanaa xiriir la yeeshaa maqaarka ama xuubka xabka ee bukaanka si toos ah wuxuuna ka kooban yahay nu ...
Changsha Construction Expo si guul ah ayaa loo qabtay, DONEAX pulse disinfection robot ayaa ka caawisay bandhiga ka hortaga cudurada faafa!
Bishii Maajo 15-17, bartamihii 12-aad ee Shiinaha (Changsha) dhiirrigelinta qalabka dhismaha cusub iyo dhiirrigelinta guryaha oo dhan Expo (hadda kadib waxaa loo yaqaan 'Changsha Construction Expo)' oo hal-ku-dhigga ah "hal-abuurnimo, iskaashi iyo horumarin lagu guuleysto" ayaa lagu qabtay Changsha. Caalamka ...
Codsiga robotka disha jeermiska jirka ee jirka lagu dilo ee jeermiska dilaa ah ee isbitaalka
Jeermiska jeermiska dila jirka waa hab wax ku ool ah oo loogu talagay jeermiska cudurka faafa iyo barta faafa. Sida ku xusan qorshaha cusub ee xakameynta oof-wareenka iyo tilmaamaha, qiyaas dhammaystiran oo jeermis-dilis ah waa in la hirgaliyaa ka dib markii tuhmanayaasha cudurka sanbabada ee cusub ee loo yaqaan 'coronavirus pneumonia' iyo ...